Aseda nnwom (1-6)
“Yah Yehowa ne m’ahoɔden” (2)
12 Ɛda no, wobɛka sɛ: “O Yehowa, meda wo ase,Efisɛ wo bo fuw me de,Nanso nkakrankakra w’abufuw ano dwoe, na wokyekyee me werɛ.+ 2 Hwɛ! Onyankopɔn ne me nkwagye.+ Menya ahotoso na merensuro,+Efisɛ Yah* Yehowa ne m’ahoɔden ne me tumi,Na wabɛyɛ me nkwagye.”+ 3 Mode ahurusi bɛsaw nsuAfi nkwagye nsuti no mu.+ 4 Na saa da no, mobɛka sɛ: “Monna Yehowa ase, mommɔ ne din,Monka ne nnwuma nkyerɛ amanaman!+ Mompae mu nka sɛ ne din korɔn.+ 5 Monto dwom* nyi Yehowa ayɛ,+ efisɛ wayɛ nneɛma akɛse.+ Momma wɔnka eyi ho asɛm asaase nyinaa so. 6 Bɔ ose na di ahurusi, wo a wote Sion,*Efisɛ Israel Kronkronni a ɔwɔ wo mu no so.”
^ Nt., “ɔbea a ɔte Sion.” Ɛkyerɛ kurow no mufo nyinaa a wɔaka wɔn ho asɛm sɛ ɔbea.